» प्रगति मावि हेटौँडाबाट ३ विद्यार्थीले ल्याए ए प्लस
प्रगति मावि हेटौँडाबाट ३ विद्यार्थीले ल्याए ए प्लस
१३ असार २०७६, शुक्रबार १७:४१
आशिष खतिवडा, १३ असार । २०७५ साल चैतमा सम्पन्न भएको माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) को परिक्षाफल प्रकाशित भएसँगै मकवानपुरमा समेत विभिन्न विद्यार्थीहरुको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । यसैबिच हिजो राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको परिक्षाफल अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा अवस्थित प्रगति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत ३ जना विद्यार्थीहरुले ए प्लस ग्रेड ल्याउन सफल भएका छन् ।
परिक्षामा कुल ८४ जना विद्यार्थीेहरु सहभागी भएकामा ३ जनाले ए प्लस ग्रेड ल्याएर परीक्षा उतिर्ण गरेको विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक किशोर पराजुलीले जानकारी दिए । त्यस्तै विद्यालयबाट १२ जनाले ए ग्रेडमा, २० जनाले बि प्लस ग्रेडमा र २० जनाले सी प्लस ग्रेडमा परीक्षा उतिर्ण गरेका छन् ।
ए प्लस ग्रेडमा परीक्षा उर्तिण गर्नेहरुमध्ये सिम्बल नम्बर १०३३४७५० का विशेष दाहाल एक हुन् । उनले ३.८ जि.पि.ए. प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै सिम्बल नम्बर १०३३४७५९ भएका रोशन चौधरीले ३.७५ जि.पि.ए. र सिम्बल नम्बर १०३३४७५१ भएका दिलिप कुमार साहले ३.६५ जि.पि.ए. प्राप्त गरेका छन् ।